Mhleli: Umcimbi womculo wesintu | News24
Mhleli: Umcimbi womculo wesintu
NGICELA ungiphe isikhala okokuqala ngqa ngike ngizwakalise uvo lwami ngomcimbi wochungechunge womculo wesicathamiya engike ngawuhambela lapha eMgungundlovu ngempelasonto esanda kudlula.
Ngiyilenhlobo eziqhenyayo ngomculo wesintu futhi ngikhule ngiwumlandeli omkhulu wawo ngisho nomama wami uSizakele uyazi nalapho elele khona. Kodwa ke bengingakaze ngizithole ngisemcimbini lapho amaqembu kacothoza eshiyelana khona inkundla kudele umakhasana.
Nokuthi ngize ngiye kulomcimbi ingoba bengizilandelela iqembu lami i-Soul Brothers kanti ngizozizuzela okungaphezulu kwalokho. Angifuni ukuqamba amanga ngifike ngahlabeka umxhwele indlela abaculi besicathamiya abayenza ngayo into yabo yacaca bha.
Engakuqaphela ukuthi lomculo usugcwele abantu abasha, bayaswenka labantu, amagagu benjalo futhi umculo wabo unomyalezo ongadingwe kutolikwa.
Bebekhuza kakhulu imigilingwane esiyande kakhulu ezweni yokubulawa kwezingane, abantu besifazane, amakhansela, abebala elimhlophe kanye nabobhejane. Uma kungathiwa angibale iqembu elilodwa eladlala kangcono ukudlula amanye ngabe ngiyaphosisa uma ngingathi ngingakwazi ukulitomula.
Ngokuhlukana kwawo ayephuma sisadinga aqhubeke bese kusho khona ukuthi isikhathi sidliwa yinja. Uma ungaphinda lomcimbi futhi nesimo singivumela ngisengaphinde ngiwuhambele.
Yinto enhle lena eyenziwe abahleli ngokuthi bake basiqhamukele nokuhlukile kwethu kwakudala nesesicabanga ukuthi sekuyashabalala. Ngalomculo sibonga asiphezi kwiqhawe alawuphakamisa uBhodloza Nzimande owayesoKhozini fm.
Nabo futhi abaculi ababeshiyelana inkundla babonga bangaqeda ngokuhlanganiswa kukuhle nje kungaziwe ngokuqhudelana. Sahlala kwasa emnyango kungavumi ngisho usukume uyochitha amanzi ngoba uzophuthelwa.
Kwangijabulisa kakhulu nokubona iqembu lamantombazane amancane evula inkundla eshaya wona umculo kacothoza.